09 / 05 / 2013 - RayHaber
နေ့: မေလ92013
Bombardier သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးသွင်းနေ့ ORGANIZATION
09 / 05 / 2013 Levent Ozen 0
Bombardier သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးသွင်းနေ့, ရထားလမ်းနည်းပညာကမ္ဘာကြီးကိုခေါင်းဆောင်, တူရကီနှင့်တူရကီကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစျေးကွက်အားပေးပြီးမှအရေးပါမှုတစ်ခုအရိပ်အယောင်, 60 မေလ 14 အင်္ဂါနေ့ Divan အာရှသကဲ့သို့, တိုင်းပြည် Bombardier သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် xnumx't ပိုပြီးအသိဉာဏ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်ကမ်းလှမ်း [ပို ... ]
Tala Tala ခရိုင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center ကမြို့တော်ဝန် Mamdouh Büyükkılıç'ın, 1 ဖြစ်လာခဲ့သည်။ နှင့်2။ Kayseri စက်မှုဇုံ, Kayseri အခမဲ့ဇုန်, Traktörcüဝက်ဘ်ဆိုက်, သစ်သားထည်စက်မှုဇုန်, သံမဏိပရိဘောဂစက်မှုဇုန်, Mimarsinan ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုန်နှင့်ဗဟို [ပို ... ]
မေလ 20 အတွက်တတိယလေဆိပ်စာချုပ်
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်တတိယလေဆိပ်မေလတွင် 20 စာချုပ်နှင့်dünyanınıတှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်လေဆိပ်ရဲ့စာချုပ်xnumx'üncပြည်နယ်လေဆိပ်လုပ်ငန်းရဲ့ (SAE)3တွင်အကြီးဆုံးလေဆိပ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ မေလအတွက် 80 နှစ်ပတ်လည်နေ့, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှစ်ပတ်လည်နေ့လက်မှတ်ရေးထိုးလိမ့်မည်။ [ပို ... ]
Adanada ရထားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Handicapped သူ၏အသက်တာကုန်တင်ရထားဖြင့်သေလုပ်ကြံခံရပြီးနောက် Adana အတွက်ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုလူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်ဆုံးရှုံးကူး။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်, Yeşilevler 05.20 အတွက်ရပ်ကွက်အတွင်းYeşilevlerမီတာကနေတဆင့်မီးရထားပေါ်မှာနာရီကွာ 100 အဆင့်ကိုဖြတ်၏ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ [ပို ... ]
ရေနံထွက်ပစ္စည်းများတင်ဆောင်လာသောရထားလှည်းအနီး 50 Beloy Kalitva အခြေချနေထိုင်ထက် သာ. မီးရှို့ရာ Wagon ရုရှားရဲ့ Rostov ဒေသသန်းပိုမိုသယ်ဆောင်ရေနံထုတ်ကုန် 50, မီးရုရှားနိုင်ငံထုတ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။3တထောင်ကလူဒေသတွင်းရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါလွဲချော်ရပ်တန့်လှည်း၏ 8 [ပို ... ]
RayHaber 09.05.2013 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
Yaptırılacaktırကတ်ကြေးဘာသာစကားများအဖွဲ့၏ဆောက်လုပ်ရေးကီလိုတည်ထောင်ခြင်းမှ Relay မူလစာမျက်နှာ (TULOMSAS) Hydraulic ပလက်ဖောင်းအဖွဲ့ဝယ်ယူပါလိမ့်မည်လက်ခံရရှိနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး cabling ၏ထောက်ပံ့ရေးနှင့်တပ်ဆင်၏ကွန်ကရစ်တဲဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ကလှေငြိမ်ထိန်းသောမြို့ရိုးအလုပ်ဖြစ်တယ် monoblock ပါလိမ့်မည် [ပို ... ]
ပထမဦးစွာအမျိုးသားမီးရထား signal စနစ် TCDD နှင့် TUBITAK တူရကီအတွက်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းမီးရထားပို့ဆောင်ရေး၌ကြီးသောအပြင်းအထန်လုပ်ဆောင်ဖေါ်ပြခြင်းခံခဲ့ရသည်အကောင်အထည်ဖော် Denizli အတွင်းပထမဆုံးအမျိုးသားရေးရထားလမ်းအချက်ပြစနစ်ဖြင့်ပူးပေါင်းတီထွင်မှုစနစ်ပြအတွင်းသိသိသာသာတိုးတက်မှုဖို့ Aegean ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 2009 [ပို ... ]
အာဒိုဂန်: Insider vurulmas4လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကျနော်တို့ Marmaray ရှိသည်မယ်လို့
အာဒိုဂန်: Insider vurulmas4လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကျနော်တို့ Marmaray န်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်သူတို့အခု Marmaray ၏ဖွင့်ပွဲနှင့် ပတ်သက်. မိမိအအကဲဖြတ်အတွင်းမှသေနတ်ပြောသည်မယ်။ အာဒိုဂန်ကျွန်တော်တို့ဟာခဲ့အထဲမှာကျနော်တို့4လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းယခု Marmaray မယ်လို့ vurulmas, ကြည့်ရှုလော့ "ဟုပြောသည်။ ဝန်ကြီးချုပ် Recep [ပို ... ]
Sengul İZBANလိုင်းအကြောင်း AK ပါတီİzmirလက်ထောက် Talk ကို
လိုင်း AK ပါတီİzmirလက်ထောက် Aydin Sengul အကြောင်း AK ပါတီİzmirလက်ထောက် Sengul İZBANဆွေးနွေးပွဲနှစ်ပေါင်းများစွာ9ဖို့အလွန်အမင်းဖျောကြောင်းလျောက်ပတ်စွာ, "ဝန်ဆောင်မှုမှာ" ဆိုး "ဟုအဆိုပါ subsubsidiary ၏ဖွင့်ပွဲမှာမိမိကိုယျကိုဝေဖန်သောသူတို့၏အမျိုးအ Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Aziz က Kocaoglu [ပို ... ]
လေဆိပ်İZBANအစီအစဉ် Adnan Menderes လေဆိပ်ပြည်တွင်းပြောင်းလဲမှု Terminal နှင့်İZBANဘူတာရုံအကြားအကူးအပြောင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ယင်းဒေါသဖြင့်ကြေညာချက် "ဟုလုံခြုံချောမွေ့အသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွက်အပေါငျးတို့သအစီအစဉ်များမှာ operating terminal စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ မသန်စွမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးသည် [ပို ... ]
1 မီတာ Ray အတွက်တူရကီက Metro လိုင်းခြင်း
09 / 05 / 2013 Levent Ozen 1
တူရကီက Metro လိုင်း 1 မီတာ Ray Karayalçınတူရကီမြို့တော်ဝန် Melih Gökçek installed ခံခဲ့ရခြင်း။ နိုင်ငံရေး၏ကျောင်းများ၏ဧည့်သည်ကထောက်ခံနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေး၏အကယ်ဒမီနှင့် Denizli Young ကပြုလုပ်ရန်လာရောက်လေ့လာရဲ့အသင်း (DEGIAD) ကဖွဲ့စည်း Denizli, SHP သမ္မတဟောင်းနှင့် [ပို ... ]
ရထားလမ်းကုန်တင်ကံမကောင်းအစောပိုင်းနှစ်များတွင်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးဤမျှ 68 ဝေစုအတွက်စုစုပေါင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသမ္မတနိုင်ငံ ?? အဆင့် 1.5 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်ယနေ့, တူရကီတင်ပို့သူများညီလာခံ (TIM) ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆို, disfavor တိထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်Bülent Aymen သို့ကျဆင်း [ပို ... ]
ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သွားရောက်ခြင်းTÜVASAŞ Skoda Skoda သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, Skoda လျှပ်စစ်နှင့်အမိန့်ရထားကုမ္ပဏီထံမှTÜVASAŞအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းပါဝင်သည်ဟုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားနေဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ယာဉ်များမြှင့်တင်ရန်နှင့်သူတို့မှာလည်းထုတ်လုပ်ကြသည်မှကုမ္ပဏီနှင့် [ပို ... ]
ပြစ်မှုဆိုင်ရာများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင် YHT ဆောက်လုပ်ရေးထရပ်ကား
Sakarya Sapanca ခရိုင်၏ခရိုင်အတွင်းရှိနွေရာသီရဲ့ဆိုက်ရောက်နှင့်အတူဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အလုပ်လုပ် YHT အဆိုပါ Gendarmerie အဖွဲ့များချိတ်ဆက်ထားသောထရပ်ကားယာဉ်အသွားအလာထိန်းချုပ်မှု၎င်း၏ပြစ်ဒဏ်များတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အသွားအလာခရိုင် Gendarmerie စစ်ဌာနချုပ်အသင်းများကိုတာဝန်၏ဧရိယာအတွင်းတည်ရှိပြီးဧရိယာကိုထိန်းချုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
Malatya TRAMBUS နူးညံ့ kike ဝေဖန်ခံရ
ဒေသခံ TRAMBUS အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကအခိုငျအမာအားဖြင့် skiff ဝေဖန်ခံရသုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်မတိုင်မီမကြာမီဖန်ဆင်းတင်ဒါ၏ Malatya မြူနီစီပယ်။ အစည်းအဝေးခန်းမများတွင်ဧပြီလ 22 2013 အပေါ် Malatya မြူနီစီပယ်Beydağıစည်ပင်သာယာဝန်ဆောင်မှုအဆောက်အ [ပို ... ]
တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းလိုင်းများ, ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားလမ်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တထောင်ကီလိုမီတာကွာမြို့မှဘေဂျင်းမြို့တော်ကွမ်ကျိုး2300 ကနေရထားရှစ်နာရီကြာမှတတ်၏။ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားလမ်း, [ပို ... ]
4 FOR ခရိုင်ရုံး TATVAN GAR အဘို့တည်ဆောက်2မသန်စွမ်းဓာတ်လှေကားပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေ 4734 19 အပိုဒ်အမှတ်အရသိရသည်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုပွင့်လင်းလေလံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ရပ်, ရပ်လိုက်နိုင်သည်။ အဆိုပါတင်ဒါနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက် [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Ray ယူနစ်ကို Maintenance နှင့်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ရေတိုင်ကီဘတ်စ်ကား၏ပန်ကာနှင့် drive ကို-ပစ္စည်း system ကိုအေး
ရထားဘတ်စ်ကားအဲယားကွန်းယူနစ်၏Xnumx.bölg TCDD ညွှန်ကြားမှုနှင့်စနစ်ကို Maintenance နှင့်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်း 3- စီးပွားရေးပိုင်ရှင်ပြန်ကြားရေးအုပ်ချုပ်ရေး 1 အဖြစ် drive ကို-ပစ္စည်းဥစ္စာ၏ရေတိုင်ကီပန်ကာ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အုပ်ချုပ်ရေး; က) အမည်: TCDD [ပို ... ]
Uludag ရဲ့ရာစုနှစ်တစ်ဝက်အရွယ်ကေဘယ်လ်ကားလိုင်း (ဗီဒီယို) ဆွဲထုတ်ခဲ့သည်
Uludag ရဲ့ရာစုနှစ်တစ်ဝက်အရွယ်ကေဘယ်လ်ကားလိုင်း bursa ထွက်ဝမ်းခွဲခြင်းနှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအဟောင်းကေဘယ်လ်ကားတင်ဆောင်လာသောဝါယာကြိုးများ၏ 1963 တည်ဆောက်မှုရွှေ့ဖို့စတင်ခဲ့သူတွေကိုသန်းပေါင်းများစွာ၏အမှတ်တရများအတွက်တစ်နှစ် 50 အရပ်ဌာန၌လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အသစ်ကေဘယ်လ်ကားလိုင်းဇူလိုင်လSarıalan, နိုဝင်ဘာတပ်ဆင်ပါလိမ့်မည် [ပို ... ]